Shaqada suuqa-madow | Samfunnskunnskap.no
Shaqo suuq-madow waa sharci-darro, waxaana loo arkaa dembi dhaqaale. Shaqabixiyeha iyo shaqaalaha waa lagu ciqaabi karaa shaqada suuqa madow ah.
Shaqo madow waa anshax xumo. Shaqobixiye aan cashuur bixin, waxba kuma darayo danta guud. Sidan ayey shaqada madoobi ku noqoneysaa si la mid ah in bulshada wax laga xadey.
Sannad kasta waxay dawladdu weydaa malaayiin korooner oo ah dakhli cashuur, khidmadada shaqobixiyaha laga qaado iyo khidmada caymiska qaranka sababo la xidhiidha shaqo suuq-madow. Tani waa lacag ay ahayd in lagu bixiyodaryeelka bulshada.
Sharci-darro iyo anshax xumo waxa u dheer in shaqada suuqa-madoobi ay cawaiqib dhaqaale iyo mid kaleba ku yeelaneyso shaqaalaha sida:
mushahar la’aan haddii la xannuunsado
ma lihid lacag fasax
ma lihid lacag kuu dhiganta ma la hawlgabo
xaq uma lihid lacag shaqo la’aan markaad shaqo beesho
ma lihid caymis shil-shaqo
ma lihid fursad aad lacag kaga daynasto bangiga
ma lihid wax heshiis-shaqo ah – ma lihid caddeyn shaqo-ka-tegis- ma lihid dukumenti khibrad-shaqo, way adag tahay in aad shaqo kale heshaa
Shaqada suuqa madowi waa sharci-darro.
In aad si madow u shaqayso waxa ay la macne tahay in aad shaqayso adigoon wax heshiis ah haysan oo aan bixin cashuur. Shaqobixiyuhu ma bixiyo xataa khidmada shaqobixiyaha ama khidmada caymiska qaranka ee shaqeeyaha.